Uyicwangcisa njani iNgcambu yokuJonga kwiGoogle SketchUp 8
Indawo yokujonga ingakanani imodeli yakho yeGoogle SketchUp onokuyibona kwiwindows yakho ngexesha elinye. Khawufane ucinge ngamehlo akho afana necone, isiphelo esitsolo sikhombe ngamehlo akho kwaye ikhowuni iya ikhula njengoko isiya kude kuwe. Yonke into ewela ngaphakathi kwekona ibonakala kuwe, kwaye yonke into engaphandle kwekona ayibonakali.
Ukuba uyayonyusa ikona yekona kwisiphelo esineepoyinti, ikhowuni iya ibanzi, kwaye ubona ngakumbi okuphambi kwakho. Ukuba unciphisa i-engile, ikhowuni iyancipha, kwaye ubona kancinci.
Ukulinganiswa ngeedigri, intsimi ebanzi yokujonga iza kuluncedo xa ungaphakathi kwemodeli yeSketchUp, kuba ukusebenza kwimodeli ongayiboniyo kunzima.
ezona pilisi zintle zokulahleka kobunzima
Ngumbono olungileyo ukudibanisa kunye nentsimi yakho yokujonga ngelixa ujikeleza ngaphakathi kwimodeli yakho.
Khetha ikhamera, Indawo yokujonga.
Cima i-35, chwetheza 60, kwaye ucofe u-Enter.
Indawo yakho yokujonga iyanda, kwaye ngoku unembono ebanzi yemodeli yakho. Ukurhweba kukuba ubona ukuphambuka okungakumbi kwimida yefestile yakho yemodeli njengoko ulwazi ngakumbi luboniswa kwindawo efanayo.
Umgaqo olungileyo wesithupha wokumisela icandelo lakho lokujonga kukubetha ibhalansi phakathi kobungakanani kunye nomgangatho; umbono obanzi uhlala uthetha ukuphazamiseka okungakumbi. Umzekelo. Ukujonga i ngaphandle wento oyakhileyo, ungathanda ukusebenzisa intsimi yokujonga iidigri ezingama-35 ukuya kwezingama-45. Ukujonga okungaphakathi, unokukhetha ukusebenzisa ama-60 okanye ama-70 degrees.
Ukuba unento oyaziyo malunga nokufota, ungabonisa indawo yokujonga kwiimilimitha, ngokungathi usebenzisa iilensi zekhamera. Ukuchwetheza 28mm ikunika umbono we-engile ebanzi, ngokungathi ujonge ngelensi ezingama-28mm. Kubantu abacinga ngomhlaba wokujonga kule migaqo, oku kunokuba yinto enomdla ngakumbi kunokuzama ukuthelekelela iikhoni zombono.
zingaphi iipilisi ze-nyquil zokuthatha
Ixesha lokufumana kwakhona ukungcola komqolo
I-nucynta 100 yexabiso lesitalato
amayeza amatsha e-bipolar 2019
yeyiphi ipilisi engama-377